Sida loo abuuro xiriiriyeyaal isku-xir ah Manifold GIS - Geofumadas
Febraayo, 2009 GIS kala cayncayn ah
Xiriiriyaha 'hyperlink' ayaa marwalba lagama maarmaan u ah khariidad, waxaan u adeegsanay, tusaale ahaan, lakabka 'cadastral' si aan ula jaanqaadno sawirrada, shahaadada cadastral, diiwaanka diiwaanka ama marka la eego lakabka degmada si loola xiriiro macluumaadka la xiriira dhulkaas, inta badan wixii aan si fudud ayaa loo qori karaa. Waxaan ku arki doonaa kiiskan sida loo abuuro xariiro iskuxirid khariidad iyadoo la adeegsanayo barnaamijka GIS kala cayncayn ah.
Manifold wuxuu ku shaqeeyaa feylasha leh kordhinta .map, oo naftooda u dhiganta joornaal shaqsiyeed, halkaas oo sawirada, lakabyada vector, miisaska, iwm lagu keydin karo. Laakiin sidoo kale waxaa jiri kara oo keliya faylasha lalaxiriira sida ArcGIS mxd oo kale.
Markaa si aad uhesho sharraxaad, shayga waa inuu haystaa miis; Tani waxay noqon kartaa meel ka baxsan khariidada (ku xiran) ama xitaa diiwaanka dibadda ee nooca Oracle, MySQL iwm.
2 Sida loo sameeyo
Waxa ugu horreeya waa in lagu daro tiir cusub, waxaa lagu magacaabaa magaca iyo nooca, kiiskan waxaan dooranaynaa url.
Markaas in file jihada this la xiriira waxaa la dhigayaa, waxay noqon kartaa degaanka, in mid ka mid ah saxannada of mishiinka, IP aabooyinka ah ama magaca computer ama xitaa Internet-ka la http nooca URL a: //
Manifold wuxuu aqbalaa cinwaanada leh boorsooyin, xitaa webka url, wuxuu isbedelaa jilayaasha marka uu wacayo sheyga.
Si aad u furto hyperlink, kaliya riix khariidada oo waxay kor u qaadaysaa faylka barnaamijka.
Sidaa daraadeed taasi maaha kor u kicinta sheyga oo ah sheyga koowaad, waxaa la gujiyey iyadoo la adeegsanayo furaha ctrl, sidan oo kale waxay kor u qaadi doontaa miiska macluumaadka la xiriira sheyga.
Haddii ay dhacdo in loo diro faylka IMS adeegga, hyperlink waa la hayaa, tan waa mid ka mid ah xirfadaha loo isticmaalo in lagu shaqeeyo faylal badan oo ka mid ah daabacaadda IMS sidaan u aragno maalmo yar
Post Previous" Hore Qoraa Toos ah, album sawir
Post Next 7 Wonder, dagaalkii 77Next »